Posted by Tranquillus | Mar 14, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Lahaanshaha qorshe qorid waxay lamid tahay inaad haysato mashruuc fiican kahor intaadan aadin ganacsi ama aad nashqadeynayso qaab dhisme intaadan dhisin ka hor. Naqshadeynta ayaa had iyo jeer kahoreysa garashada haddii kale natiijadu waxay aad uga duwanaan kartaa fikradda asalka ah. Xaqiiqdii, bilaabista iskuqorista qorshe qoristu maahan waqti lumis laakiin waa waqti badbaadin maxaa yeelay shaqo qabashada si xun waxay ula jeedaa dib uqabasho.
Maxay u leeyihiin qorshe qoris?
Lahaanshaha qorshe waa mid ku habboon in qorista shaqadu ay ka kooban tahay faa iidooyin u adeegi kara ujeedooyin badan. Xaqiiqdii, ujeeddadeedu waxay noqon kartaa wargelin, xayeysiin, ama waxyaabo kale. Qorshaha ugu habboon wuxuu kuxiranyahay ujeeddada qoraalka. Qoraal leh hadaf kaliya oo ah in macluumaadka uusan yeelan karin qaab dhismeed la mid ah qoraalka kale kaas oo ujeedkiisu yahay qancin iyo rajo. Marka, xulashada qorshuhu waa inay ka jawaabtaa su'aasha nooca qaataha waana inay sidoo kale tixgelisaa arrimaha.
Sifooyinka qorshe qorista wanaagsan
In kasta oo tallaal kastaa gaar yahay, haddana waxa jira shuruudo guud oo ay tahay in qoraal kasta oo xirfadle ahi u hoggaansamo. Waxay inta badan ku saabsan tahay amar iyo iswaafajin. Tan macnaheedu waxa weeye inaadan kaydin karin fikradahaaga dhammaantood wada boodboodaya, xitaa haddii dhammaantood ay khuseeyaan. Ka dib markaad qorto dhammaan fikradahaaga, waxaad u baahan tahay inaad abaabusho oo aad mudnaanta siiso iyaga oo u oggolaanaya akhristahaaga inuu u arko dhicitaanka qoraalka mid macquul ah oo muuqda. Si tan loo sameeyo, abaabulidda fikradaha waxay u baahan doontaa inay noqoto mid horumarsan oo si wanaagsan loo qaabeeyey, taas oo kuu oggolaaneysa inaad muujiso waxyaabo gaar ah oo gaar ah oo aad rabto inaad indhaha ku soo jeediso.
Su'aasha ah ogaanshaha haddii aan yeelan karno qorshe caalami ah, jawaabtu waa iska cadahay maya maxaa yeelay qorshaha qorista wuxuu raacaa ujeeddo isgaarsiineed. Markaa, ma awoodi doontid inaad ku guuleysato qorshahaaga adiga oo aan marka hore si cad u go'aamin ujeeddadaada wada xiriirka. Haddaba, amarka saxda ahi waa qeexidda ujeeddooyinka; ka dib, horumarinta qorshaha sida ku cad ujeeddooyinkan; iyo ugu dambeyntiina, qoritaanka lafteeda.
Samee qorshe sida ku xusan ujeeddada lagu gaarayo
Nooc kasta oo qoraal ah waxaa jira qorshe ku habboon. Tani waa sida ay badanaa lagama maarmaan u tahay in la yeesho qorshe qeexitaan marka ujeedadu tahay sharaxaadda alaabta ama ra'yiga adeegga. Tani sidoo kale waa sida ay u habboon tahay in la doorto qorshe la tiriyey ee xusuus-qor, dukumeenti kooban ama warbixin. Garoomada, waxaad dooran kartaa qorshe muujinaya, iyo macluumaad, qorshe qaab dhexdhexaad ah oo daqiiqado ah. Intaa waxaa dheer, taageerada sidoo kale waxay muhiim u tahay doorashada qorshaha. Tani waa sida loogu talagalay a email Qorshe saxafi ama Ahraamta rogan ayaa badiyaa samayn kara khiyaanada.
Xuduudaha kale waxay saameyn ku yeelan karaan dulmar sida cabirka qoraalka. Tani waa sida ay suurtogal u tahay in la isku daro laba ama saddex tallaal qoraallada aadka u dheer. Sikastaba xaalku ha ahaadee, qorshuhu waa inuu isku dheelitiraa nuxur ahaan iyo qaab ahaanba.
Samee qorshe qoraal oo wanaagsan shaqada 16-Maarso, 2021Tranquillus
horeSidee guul looga gaaraa qaabkeeda?
socdaKa mamnuuco khaladaadka higgaadinta shaqada